गोविन्दालाई के को हैसियतमा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा किन राखियो ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ०६:११ English
गोविन्दालाई के को हैसियतमा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा किन राखियो ?
काठमाडौँ, २१ कार्तिक । बलिउड अभिनेता गोविन्दा आहुजालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा राखिएकोप्रति एक जना पूर्वमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन् । भूतपूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवम् राप्रपा संयुक्तका नेता सुनिलबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गोविन्दालाई कुन हैसियतमा विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न दिईयो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
गत मंगलबार नेपाल आएका गोविन्दा र उनकी पत्नी सुनितालाई विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा राखिएको थियो । यो कक्ष अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली कलाकारले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
थापाले लेखेका छन्, ‘हामिले नबुझेको चाहिँ कुन हैसियतले बलिउड अभिनेता गोविन्दा अहुजा श्रीमतीसहित मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका बेला त्रिभुवन बिमानस्थलको अति विशिष्ट कक्ष उपयोग गन्र पाए । जबाफ पाईएला कि । भारतमा हाम्रा कलाकारले त्यो सुबिधा पाउँछन् ?’
यस विषयमा विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप तिवारीले भने गोविन्दा आएको आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १४:२२ मा प्रकाशित